सुगर बढेमा के गर्ने ? - खोजतलास
मधुमेह भनेको पाचनको रोग हो । कार्बाेहाईड्रेट आहार बढि भई नपच्नाले नै यो रोग लाग्ने हो । त्यसैले उपयुक्त ढंगले आहार लिएमा यो रोग नियन्त्रणमा रहने मात्र होइन निर्मुल नै पनि हुन्छ । अहिले यहा चर्चा गर्न खोजेको टाइप टु डायबिटजको बारेमा हो ।
मधुमेह भन्नाले गुलियो पिसाप हुनु हो अर्थात् पिसापमा गुलियो मिसिएर आउनु हो । पिसापमा गुलियो आउनु अघि रगतमा चिनीको मात्रा बढिसकेको हुन्छ । सामान्यत रगतमा चिनीको मात्रा खाली पेटमा ६०–९० मि.गा्र प्रति डि.एल र खाएर २ धण्टा पछि बढिमा १४० मि.गा्र प्रति डि.एल हुदा सुरक्षित र राम्रो मानिन्छ । एचबिएवानसि ६% भन्दा बढि भयो भने रगतमा सुगरको मात्रा बढेको छ भनेर बुमmनु पर्दछ । रगतमा सुगरको मात्रा बढेर १८० मि.गा्र भन्दा बढि भएमा पिसापमा चिनी देखा पर्दछ । सामान्य अवस्थामा मिगौैलाले चिनीलाई पिसापमा जानबाट रोक्छ तर रगतमा चिनीको मात्रा अत्यधिक हुन गएपछि त्यसको हानीबाट शरीरलाई जोगाउन मिगौलाले चिनीलाई पिसाप मार्फत शरीरबाट बाहिर पठाउँछ ।सामान्य अबस्थामा रगतमा कहिल्यै चिनीको मात्रा बढ्रदैन तर मानिसले अत्यधिक मात्रामा एकदलिय अन्न तथा गुलियो आहार प्रयोग गरेपछि चिनीलाई नियमित गर्ने प्रणालीले कामगर्न छोड्छ र रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ ।
हामीले खाएका खानेकुराहरु सबै पेटमा गएर चिनी नै बन्ने हो । मानिसले खाने भोजनको मुख्य अंश शरीरमा गएर ग्लुकोजको रुपमा अवशोषण हुन्छ र ग्लाइकोजन वा बोशोको रुपमा त्यो खर्च हुन्छ भन्ने कुरा सुुक्ष्म अध्यनले देखाएको छ । शरीर भित्र भोजनको कार्बोहाइड्ेड शतप्रतिशत, प्रोटिन ५८ प्रतिशत र बोशो चिल्लोबाट १० प्रतिशत ग्लुकोजमा रुपान्तर हुन्छ भन्ने मानिएको छ तर शरिर भित्र पुग्ने ग्लुकोज शरिरको आवश्यकता भन्दा बढि भएमा पहिले ग्लाइकोजनको रुपमा जम्मा हुन्छ पछि बोसोमा परिवर्तन हुन्छ अनि मान्छे मोटाउदै आउँछ ।
सुगर बढ्रने कारणहरु –
–कुल आहार शरीरको आबश्यकता भन्दा बढि खानु ।
–आबस्यकता भन्दा बढि कार्बोहाइडे्ड खानु, अत्यधिक मिठाइ, गुलियो चिज धैरै खानु ।
–शारिरीक श्रमको अभाब, ब्यायामको कमी र अल्छी गर्नेलाई ।
– मोटोपन ।
– तारेभुटेको चिज, जंकफुड बढि खानु ।
–प्यानक्रियाज ग्रन्थीमै बिकृती उत्पन्न हुँदा पनि रगतमा चिनी बढ्छ ।
रगतमा चिनी बढ्दाको लक्षणः
–धेरै भोक लाग्नु, प्यास पनि बढि लाग्नु ।
–धेरै पिसाब हुनु, पानी पिएको अनुपात भन्दा बढी पिसाप हुनु राती बढि पिसाप हुनु ।
– खाना खाएको अनुपातमा तौल नबढ्नु ।
–शरिरमा आलस्य सुस्ती हुनु,सुत्न बढी मन लाग्नु ।
–घाउँ खटिराहरु आउनु, चोटपटक लाग्दा घाउँ निको नहुनु ।
–कब्जीयत हुनु ।
–आखांको क्षमतामा कमजोर हुदै जानु ।
–पिडुला दुख्ने,थकाइ बढि लाग्नु ।
मधुमेहमा के खाने के नखाने ?
वास्तवमा सुगरमा खाना नहुने चिज केहिपनि छैन जो चिज स्वस्थ व्यक्तिले खान नहुने हो त्यो सुगरका बिरामीले पनि खानु हुदैन जस्तै जाँड, रक्सी, चुरोट, चिल्लो, बोसो, चिनीबाट बनेका धेरै गुलियो पदार्थहरु स्वस्थ रहन चाहनेले अन्य रोगमा पनि खानु हुदैन अनि सुगर लाग्ने बित्तिकै उसिनेको चामलको भात खाने,रोटी खान हुने तर आलु, चिनी र भात खानै नहुने भन्ने बुझाइ छ तर यो कुरा सत्य होइन । मात्रा कति लिने भन्ने कुरामा भर पर्दछ । मधुमेहको समयमा प्रयोग नै गर्न नहुने एउटै मात्र चिज उखुबाट बन्ने गुलियो चिज हो । अन्य रोगमा जस्तै यसमा ३ बराबर आहार लिनु पर्दछ । प्रकृति पे्रमी समुहले प्रतिपादन गरेको ३ बराबर आहारले यो रोग छिटै नियन्त्रणमा आउंछ ।
यदि मोटो मान्छे भए तौल घटाउने हिसाबले चार बराबर ( अन्न एक भाग,हरियो तरकारी दुई भाग र सलाद एक भाग ) लिनु पर्छ भने मोटो नभए तौल कायम राख्ने हिसाबले मात्रा निर्धारण गर्नुपर्छ । माछा, मासु, ,अण्डा र दुग्धपदार्थ बन्द नै गर्नुपर्ने होइन तर बन्द गर्दा सुगर छिटो निको हुन्छ । हामीले के खाने भन्ने कुरामा प्रकृतिले जे जस्तो दिएको छ त्यसरी आहार खाँदा सहि हुन जान्छ । बजारमा सुगर फ्रि बिस्कुट, चामल, दाल, जुस, मिठाई भनेर आएको देखिन्छ तर त्यस्तो बजारीय चिज खानु भन्दा प्रकृतिले दिएको फलफुल, हरिया सागसब्जी, पूर्ण अन्न खानाले सुगर नियन्त्रणमा आउंछ । सुगरमा मात्र होइन जुन सुकै रोगमा हामी अनुसाशित हुनुपर्छ ।
सुगरमा कुनैपनि व्यायाम गर्न सकिन्छ । पसिना आउने गरी जुन सुकै व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ । त्यसमा योगासन व्यायाम सर्बोतम व्यायाम हो ।
– सुगरका रोगीले औषधी खाईरहदा उपबासमा रहनु हुदैन, फलाहार सम्म गर्न सकिन्छ ।
– सुगर कुनैपनि हालतमा नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ नभए मधुमेह बढेर विभिन्न मर्म अङ्गहरु जस्तै आँखा मष्तिस्क, मुटु, मृगौला र कलेजो बिग्रने अवस्था आउँछ ।
–मधुमेहको औषधि प्रयोग गरिरहेकाहरुले एकै पटक औषधि बन्द गर्नु हुँदैन । आहारको उचित मात्रा प्रयोग गर्दै हप्ता हप्तामा रगत जाँच गर्दै सुगरको मात्रा घट्दै गए औषधि दिने डाक्टर सँग सल्लाह गर्दै औषधिको मात्रा घटाउदै जानुपर्छ ।
–रगतमा सुगरको मात्रा अति बढ्नाले र घट्नाले रोगी मुर्छा पर्न सक्छ । रगतमा सुगरको मात्रा बढ्दा औषधि र उचित आहारको प्रयोग गरी नियन्त्रणमा ल्याई हाल्नु पर्छ । रगतमा सुगर कम भएर हुने समस्या अक्सर मधुमेहमा प्रयोग गरिने औषधिको साइड इफेक्टले हुने गर्छ । त्यसो नहोस् भन्नाका लागि मधुमेह औषधि प्रयोग गरिरहेकाहरुले खानाको मात्रा र औषधिको मात्रामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यति गर्दागर्दै पनि सुगर कम भएर रिगटा लागेमा तत्कालै ग्लुकोजयुक्त कुनै गुलियो चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
आजकल समाजमा धेरैजसो मानिसको धारणा कस्तो छ भने बिहान मज्जाले पसिना चुहिनेगरि व्यायाम गरेपछि खानामा टन्न मनपरी खाए भइहाल्छ भन्ने धारणा रहेको छ । त्यसैले घरघरमा मोटोपन, सुगर, प्रेसर, वाथ, दम, मुटुरोग जस्ता जीर्ण दीर्घ रोगहरु देखा पर्नु र यस्ता रोगबाट मुक्तहुन साह्रै गाह्रो काम जस्तो देखिनु, रोगबाट मुक्त हुन जीवनभर औषधि खानुपर्ने र त्यो औषधि खाएर पनि रोगबाट मुक्त हुन जटिल भइरहेको अवस्था देखिन्छ । सुगर भनेको निको नहुने रोग भनिन्छ तर रोगीले रोग लागि सकेपछि पनि उचित आहार, उचित विहार र उचित विचार गरेको केही समयमा उसले खाएको औषधि र इन्सुलिन लिन नपर्ने अवस्था आउँछ । सुगर नियन्त्रणमा आउनु भनेको रोग निकोहुनु सरह नै हो । त्यसको लागि हरेकले आफुले गर्ने आहार, विहार र विचार आफैले नै उचित गरेमा सुगर मात्र होइन सबै खाले जिर्ण दिर्घ रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
2020 August 20 2:29 pm